प्रेमीसंग रेष्टुरेन्टमा खाजा खान गएकि यी युवतीलाई रेष्टुरेन्टबाटै बाहिर निकालिदिए, कारण थाहा पाउँदा सबे चकित! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > प्रेमीसंग रेष्टुरेन्टमा खाजा खान गएकि यी युवतीलाई रेष्टुरेन्टबाटै बाहिर निकालिदिए, कारण थाहा पाउँदा सबे चकित!
admin December 30, 2020 December 30, 2020 जीवनशैली, मनोरञ्जन	0
एजेन्सी । आफ्ना प्रेमीसंग रेष्टुरेण्टमा गएकी एक युवतीलाई उनले लगाएको लुगाका कारण रेष्टुरेष्टवाट निकालिएको घटनाले अहिले निकै चर्चा पाएको छ । युवतीले आफुले भोगेको घटनाका बारेमा सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा पोष्ट गरेपछि घटना चर्चित भएको हो । अस्ट्रेलियामा, एउटी युवती समुद्री किनारको रेस्टुराँवाट लुगाकै कारण निकालिनु परेको थियो । इटालीकी मार्टिना कोराडीले आफुले अष्ट्रेलियामा भोगेको यो घटना सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
अष्ट्रेलियाको बन्डी बीच (समुन्द्र किनार) मा यो घटना घटे पछि उनलाई धेरै अप्ठ्यारो लाग्यो। डेली स्टार रिपोर्टका अनुसार मार्टिनाले रेस्टुरेन्टमा ग्रे रंगको क्रप टोप र सेतो ट्राउजर लगाएकी थिइन् । उनी प्रेमीको साथमा थिइन् । जब रेस्टुरेन्टका एक युवती स्टाफ सदस्यले उनलाई उनको पोशाकको कारण रेस्टुरेन्ट छोड्न आग्रह गयरन् । फेसबुकमा पोष्ट गर्दै, मार्टिनाले लेखीन् ‘म चाहन्छु कि मानिसहरूले यस विषयमा आफ्नो धारणा राखुन् । किनकी यस घटना पछि मैले धेरै अप्ठ्यारो महसुस गरें, साथै म धेरै क्रोधित भएँ। हामीले यस रेस्टुरेन्टमा साइन इन गर्यौं र मेरो प्रेमी र मैले सिट लिएँका थियौं ।
उनले अगाडि लेखिन्, महिला कर्मचारी त्यहाँ आउने बित्तिकै उनले मलाई भनिन् कि मेरो पहिरन ठीक छैन र मलाई यस पोशाकमा यस रेस्टुरेन्टमा बस्न अनुमती दिइने छैन। म र मेरो प्रेमी उनको कुरा सुनीरहेका थियौं । हामी उनको कुरा सुनेर छक्क परेका थियौं । त्यस पछि, ति महिला कर्मचारीले उनको प्रबन्धकलाई बोलाइन् र उनीहरूलाई भन्नु पर्छ कि यो पोशाक लगाएर रेष्टुरेष्टमा बस्न पाइन्न । म चकित भए किनभने रेस्टुरेन्टको म्यानेजर पनि उनीसँग सहमत देखिन्थे।
मार्टिनाले आफ्नो पोष्टमा थप लेखिन् कि कोरोना युगको दौडान जब प्रायः रेष्टुरेन्टहरू खाली नै थिए, कसरी तपाईं यी हास्यास्पद र मूर्ख नियमहरूको कारण ग्राहकहरूलाई बाहिर लैजान सक्नुहुन्छ ? म यस विषयमा मानिसहरुको राय जान्न चाहन्छु किनकि यस घटना पछि म केहि बुझ्न सकिरहेकी छैन ।
मार्टिनाको यो फेसबुक पोस्ट एकदम भाइरल भएको छ र धेरै मानिसहरूले यस पोष्टमा टिप्पणी गरेका छन् । रेस्टुरेन्टको नीतिको आलोचना गरेका छन् । एक व्यक्तिले भने कि यो पोष्ट अफिसको लागि राम्रो नलाग्न सक्छ, तर यदि एउटा रेष्टुरेन्ट बीच (समुन्द्र किनार) मा छ भने, त्यहाँ यस पोशाकको बारेमा के आपत्ति हुन सक्छ ?
ओलीको समर्थन गर्दै भाइरल डिल्लीरामले ओलीको समर्थन गर्दै प्रचण्डलाई यस्तो भनेपछि… (भिडियो सहित)
प्रियंका भन्छिन्- ‘वर्षाले माफि मागिसकिन्, नेपाली चेली हुन् हामीले माफ नदिए कसले दिन्छ’
बुवा ऋषिकाे अन्तिम इच्छा यस्तो सम्झेर यसरी भक्कानिन्छन् रणबीर!